Fotodrafitrasa CIA Ao Tonizia Hoe? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Oktobra 2018 14:07 GMT
Avy ao amin'ny efitrano figadrana ao Bizerte (65km ao avaratr'i Tonizia), afaka namoaka taratasy iray tena mampiahiahy (nadika tamin'ny teny frantsay) izay tonga hatrany amin'ny Aterineto i Ramzi Bettibi, Toniziana iray voafonja . Mifonja mandritra ny efatra taona ao Bizerte i Ramzi noho ny namerenany namoaka teo amin'ny Aterineto, izay izy no mpandrindra, ny fanambaràna nataon'ny tarika iray mandrahoana hanao asa fampihorohoroana ao amin'ny firenena raha toa ny Praiministra Israeliana teo aloha, Ariel Sharon ka mbola nanatrika ny Fihaonambe Erantany mikasika Fampahalalam-baovao izay natao tany Tonizia tamin'ny taona 2005. Ny 15 Martsa 2005 voasambotra i Ramzi Bettibi, tao amin'ilay toerana fidirana Aterineto izay niasany. Tao am-ponja, niharan'ny fampijaliana tsy nitsahatra izy, fomba iray nezahan'ireo tomponandraikitra natao hanerena azy hiaraka hiasa amin'ireo sampana misahana ny fiarovam-panjakana. “tokony avotsotra i Bettibi satria tsy ananan'ny governemanta ny porofo milaza fa nanana fikasàna ratsy hanao heloka bevava izy, na ny fiantsoany hanao herisetra“, hoy i Sara Leah Whitson, mpitantana ny sampan'ny Human Rights Watch ao Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, tao anatin'ny fanambaràna navoaka tamin'ny taona lasa. “Ao anatin'ireo fepetra ireo, ny fanapahana sy fametahana lahatsoratra iray eo amin'ny Aterineto tsy tokony heverina ho sahala amina heloka bevava“, hoy izy nanampy.
Tao anatin'ny taratasiny, mamariparitra ny fonja miafina any akaikin'ny tananàn'i Bizerte i Ramzi, izay nanaovan'ny CIA sy ireo mpiasa miteny frantsay ny fakàna ambavany azy mikasika ireo voalaza ho fifandraisany miaraka amin'ireo tarika irakiana djihadista, sy mikasika ireo asany eo amin'ny aterineto. Araka ny voalazan'ilay taratasy, alaina ambavany ireo voafonja ary hidiana ao anaty kaontenera any aminà toerana miafina, dimy ambiny folo minitra miala an'i Bizerte raha mandeha fiara.
Hatramin'ny nanakatonana an'ireo fonja miafina an'ny CIA tao Polona sy Romania, tohin'ireo ampamoaka nataon'i Washington Post sy ireo media hafa, niparitaka ireo honohono mikasika ny famidràna an'ireo voafonja tao ho any amin'ireo fonja hafa an'ny CIA any Afrika Avaratra any. Fa ity taratasina vavolombelona iray nanatri-maso ity (na dia tsy nisy aza olona afaka nanamafy na nandiso ny hoe i Ramzi Bettibi no mpanoratra an'io taratasy io), dia toa manome “porofo” voalohany mivaingana momba ny fisian'ireo fotodrafitrasa tao Tonizia ireo. Soritany ihany koa ny toerana mety ho nisy ny fonja sy ny mikasika an'ireo voafonja sasantsasany izay nalaina ambavany sy nofonjaina an-tsokosoko. Amin'ny fomba mahagaga, nosoratana tamin'ny 9 jona 2007 ny taratasy, andro iray monja taorian'ny famoahana ny tatitra faharoa mikasika an'ireo “famonjana miafina sy famindrana tsy ara-dalàna an'ireo voafonja mahavoarohirohy an'ireo mpikambana ao amin'ny filankevitr'i Eoropa”, izay nolanian'ny komitin'ny Filankevitr'i Eoropa momba ireo raharaha ara-pitsaràna sy ireo zon'ny Olombelona.
Araka ny tatitra teo aloha, navoakan'ny International Association for the Support of Political Prisoners (AISPP)- Fikambanana iraisampirenena ho fanohanana ireo voafonja noho ny resaka politika – nanambana fitokonana vaovao tsy fihinanan-kanina i Ramzi Bettibi tamin'ny 18 Janoary 2007 mba hanoherana an'ireo fomba fitondrana ratsy sy fanararaotana zakaina any am-ponja. Tao anaty fanambaràna iray navoaka tamin'ny Aterineto ny 12 Martsa 2007, nanamarika ny fomba fampijaliana natao azy ny Filankevi-Pirenena ho an'ny Fahalalahana ao Tonizia (CNLT).
Ny 23 Febroary 2007, Ramzi Bettibi, ilay nofonjaina noho ny resaka aterineto, dia niharan'ny herisetra faratampony nataon'ireo manamboninahitra 3 miankanjo sivily tao anatin'ny fonjan'i Bizerte, izay nitonona ho toy ny borigadin'ny fiarovana ny Fanjakana. Nafatony tamin'ny seza ny tanany sy ny tongony ary notereny hisotro ronono mba hampitsaharana ny fitokonany tsy hihinan-kanina natombony ho fanoherana an'ireo herisetra natao ahy hatrany aloha. Tapaka ny iray tamin'ireo nifiny.